Uhuru Kenyatta oo la caleemo saaray - BBC Somali - Warar
Uhuru Kenyatta oo la caleemo saaray
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 9 Abriil, 2013, 10:20 GMT 13:20 SGA
Mr Kenyatta iyo ku xigeenkiisa r Ruto waxaa dacwad uga socotaa maxkamadda Hague
Madaxweynaha cusub ee Kenya Uhuru Kenyatta, ayaa waxaa maanta loogu dhaariyay xafiiska madaxtinimada xaflad weyn oo ka dhacday garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi.
Munaasabadda caleemo saarka Uhuru Kenyatta, waxaa ka soo qeybgalay hogaamiyayaal ka socda Afrika iyo diblomaasiyiin caalami ah iyo tobanaan kun oo qof.
Raila Odinga kama soo qeybgalin xafladda dhaarta Uhuru Kenyatta.
Mr. Kenyatta, ayaa waxaa loo doortay xilka madaxtinimada bishii la soo dhaafay, isaga oo ka guuleystay Raiisul Wasaaraha xilka hayay Raila Odinga.
Raila Odinga ayaa waxa uu muran ka keenay natiijada doorashada oo uu sheegay in lagu shubtay, waxaana uu dacwad geeyay maxkamadda sare ee Kenya oo markii dambe go'aamisay in natiijada doorashada ay ahayd mid sax ah.
Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto waxay dacwad uga socotaa Maxkamada caalamiga ee dambiyada.